Global Voices teny Malagasy » Antsafa Niarahana Tamin’I Alaa Adb El Fateh Tao Kairo · Global Voices teny Malagasy » Print
Antsafa Niarahana Tamin'I Alaa Adb El Fateh Tao Kairo
Voadika ny 11 Febroary 2018 13:09 GMT 1	 · Mpanoratra Ethan Zuckerman Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Ejipta, Mediam-bahoaka
(Marihina fa tamin'ny 10 Jona 2005 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy voalohany)
Bilaogera Egyptiana, mpanandra-tenin'ny open source sady mpikatroky ny demaokrasia i Alaa Abd El Fateh. Mitantana ny “Manal and Alaa's Bit Bucket “, tranonkala iray mampiantrano ny bilaoginy sy ny bilaogin'ireo fikambanana Egyptiana manohana ny fahalalaham-pitenenana sy ny demaokrasia izy miaraka amin'ny vadiny, Manal. Mitantana ny bilaogy mpanangom-baovao Egyptiana  ihany koa izy ireo.
Navitrika tamin'ny hetsika Kifaya  i Alaa – fiaraha-mientan'ny mpianatra, ny vondrona mpiaro ny zon'olombelona sy ireo vondrona hafa – izay mitaky ny demaokrasia ao Egypta, kanefa manohitra ny fihetsika vao haingana izay nataon'i Hosni Mubarak tamin'ny fifidianan'antoko maro ihany koa izy ireo satria tsy misokatra malalaka ho an'ireo kandidà mpanohitra tao an-toerana ny fifidianana. (Midika hoe “leo” amin'ny teny Arabo ny teny hoe “kifaya”.) Nanao fihetsiketsehana tao Kairo ny mpikambana tao amin'ny hetsika Kifaya tamin'ny 25 May, andron'ny fitsapankevibahoaka momba ny fanovàna ny lalàm-panorenana . Notafihana sy nodarohan'ny  mpanohana an'i Mubarak izy ireo. Nitatitra ny mpanao gazety vehivavy sy ny mpikatroka marobe fa nokitikitihana tsy ara-tsitrapo izy ireo ary voarovitry ny mpomba an'i Mubarak sy ny mpitandro filaminana ny akanjon'izy ireo.
Alaa, Manal sy ny renin'i Alaa, Dr. Laila Soueif, dia anisan'ny mpandray anjara tao anatin'ny fihetsiketsehana Kifaya tamin'ny 25 May, ary notafihan'ny hery mpanohana ny governemanta . Niresaka ny zavatra niainany i Alaa amin'ny maha-mpanao fihetsiketsehana azy, momba ny tantaran'i Kifaya, ny fifandraisan'ny Kifaya sy ny vondrona mpanohitra hafa toy ny Mpirahalahy Miozolomana, ary momba ny hoavin'ny demaokrasia any Egypta. Niresaka momba ny famahanana bilaogy momba ny zon'olombelona ao Egypta ihany koa izahay ary ny maha-zava-dehibe ny fampitam-baovao antserasera, toy ny onjam-peon'ny vondrona mpanohitra politika El Ghad  .
Lava ny antsafa- 45 minitra eo ho eo – saingy tena tsara ny mihaino izany hatramin'ny farany . (mp3, 45 minitra, 21MB)
Ny rohy sasany noresahanay sy i Alaa tao amin'ny antsafa:
never forget  – a collection of links and accounts of the May 25th protest violence and the “Black Wednesday” movement.
Aza adinoina mihitsy , rohy sy tantara momba ny herisetra nitranga tao amin'ny hetsi-panoherana ny 25 May sy ny hetsika “Alarobia Mainty”.
Gazety Antserasera Misr Digital 
El Ghad  onjampeo famahanam-baovao antserasera (Tafakatona fa maro loatra no nitady azy).
Peratry ny Blaogy Egyptiana 
Sary: Fandrehetana Labozia nandritra ny fiareta-tory iray tao Kairo, 8 Jona, mba ho fahatsiarovana ny herisetra nitranga roa herinandro lasa izay tamin'ny 25 May. Avy amin'i Manal tao amin'ny manalaa.net.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/02/11/114645/
 “Manal and Alaa's Bit Bucket: http://www.manalaa.net/
 bilaogy mpanangom-baovao Egyptiana: http://www.manalaa.net/egblogs
 Notafihana sy nodarohan'ny: http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/05/25/AR2005052500404_pf.html
 notafihan'ny hery mpanohana ny governemanta: http://www.manalaa.net/the_bastards_stole_my_laptop
 El Ghad: https://mg.globalvoices.orgwww.elghad.org
 hatramin'ny farany: http://cyber.law.harvard.edu/globalvoices/wp-content/alaaabdfateh20050610.mp3
 never forget: http://www.manalaa.net/never_forget
 Gazety Antserasera Misr Digital: http://www.msirdigital.blogspirit.com
 El Ghad: http://www.elghad.org/radio.html"
 Peratry ny Blaogy Egyptiana: http://www.egybloggers.com/